Muporofita anofanira kuva akarurama asina chipomerwa here?
churchages.net » Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » Muporofita anofanira kuva akarurama asina chipomerwa here?
Muporofita anofanira kuva akarurama asina chipomerwa here?
Pauro akadzidzisa Timotio kutaura Chokwadi. Tinofanira kutaura chidzidzo ichi nenzira imwechete iyi.
Isu vanhu venyama tine miyero yedu yatinorarama nayo uye tinotongera vanhu pakuva vachinatsa kana vachitadza.
Mwari vane miyero yavo yavanotonga nayo yekuti munhu wese anotadza.
Hakuna munhu wenyama anokwanisa kupima vamwe achienderana nemuyero waMwari. Chero vatumwa havakwanisi.
Patinotevera maporofita chaiwo emuBhaibheri tinoona muporofita akaita mhosva yekuuraya uye yehupombwe. Maporofita matatu akanyeba. Muporofita akakakavara zvakasimba kuti Jesu ndiye Mesiah. Maporofita maviri akabaira zanhi zvichibva mupfungwa dzavo raive rakaipisisa kwazvo. Muporofita akarwisa Shoko raMwari achiziva. Muporofita akafunga kuti mumwe muporofita aitenderwa kurwisa maGwaro Shoko raMwari. Muporofita akanamata mutumwa akanamata zvakare mumwe muporofita. Muporofita akabatana nechikwata chevanhu chaienda kuEgipita asi aiziva kuti vaitiza kuita hurongwa hwaMwari vachiziva zvavo sezvo aive atombovaudza kuti vasaende kuEgipita. Muporofita aishandiswa zvine simba neMweya waMwari akapinda pakuramba kushanda uye pakutsamwa kukuru. Muporofita akaramba kuenda kwaaiudzwa naMwari kuti aende akatsamwa nekubatikana zvikuru pakazozadziswa hurongwa hwaMwari. Muporofita haana kuteerera Mwari nekuda kwekumanikidzwa nevanhu vaive nehunhu hwekurwa akapihwa mubairo wakaomarara pakuita izvi. Muporofita akanyengerwa kwazvo akatadza kuita basa raMwari apo vanhu vakaipa vakauya sevakanaka kwaari.
Muporofita aive nesimba Kwazvo akatiza chiraramo chake nekuti aitya mukadzi.
Varume ava vese vakatadza kwazvo. Varume ava vose vaive maporofita.
Saka kana muchiti muporofita anofanira kuva asina chipomerwa munenge muchiri kure nekurarama muchokwadi uye munenge muchirarama munyika yenyu mega.
Tinokugamuchirai panyika ino. Kure nekururama. Kuzere kuipa asi ichiri iyo yega nzvimbo inokwanisa kurarama munhu. Ndapota rangarirai kuti Mwari ega ndiye akarurama.
Ndapota zvakare tarirai hakuna musiyano kuno pakati pemaporofita “makuru” ne “madiki”. Tarira chikwata chemaporofita ari pasi apa, vakawanda vavo vanokwanisa kunzi maporofita “makuru”.
JOBO 15:15 Tarirai, haatendi vatsvene vake; zvirokwazvo, kudenga hakuno-kunaka pamberi pake.
JOBO 4:18 Tarirai, haatendi varanda vake; vatumwa vake anovapa mhaka achiti mapenzi.
Jobo akazvisanganisa mukutaura uku. Saka vanogona chaivo pakati pedu vanhu havatokwanisi kufadza Mwari.
JOBO 19:25 Asi ndinoziva kuti mudzikinuri wangu mupenyu, Uye kuti pakupedzisira uchasimuka panyika;
26 Kunyangwe ganda rangu richinge raparadzwa saizvozvo, Kunyangwe zvakadaro ndichaona Mwari ndine nyama yangu.
Saka Jobo akabudirira kuva muporofita nekukwanisa kwake kuporofita rumuko.
ISAYA 64:6 Nokuti isu tose tave soune tsvina, kururama kwedu kwose kwafanana nenguvo ine tsvina; isu tose tinooma seshizha, zvakaipa zvedu zvinotibvisa semhepo.
Isaya muporofita mukuru anozvisanganisa pakutaura uku kunobata kuneta kwenyama yedu yevanhu. Chirangaridzo chekuti takaberekwa nebonde, uye bonde ndicho chivi chekutanga. Saka munyama hatingafi takaverengwa kuzvizhinji.
Kubudirira kwedu kwechokwadi kunenge kuri mukukwana kwedu muhurongwa hwaMwari hwakanaka. Kana Mwari vakatishandisa neimwe nzira, zvisinei nekuti iduku sei, kuti vazadzikise Muono Wavo Mukuru zvino vanobva vafadzwa nesu, zvisinei nekuneta kwedu kana miganhu yatingagumire.
Zvisinei nemiganhu yaakaisirwa semunhu, kunyora kwaIsaya kune hudzamu kwazvo kwakarukwa nechiporofita chikuru kwazvo zvakafanana nechikamu chinonongedzera Zuva rePentecositi:
ISAYA 28:11 Zvirokwazvo achataura norudzi urwu navanhu vane miromo yorumwe rudzi, norurimi rwokumwe.
Aive akaneta semunhu wenyama asi Mwari vakamushandisa nenzira huru kwazvo.
VAROMA 3: 10 Sezvazvakanyorwa zvichinzi: Hakuna wakarurama, kunyangwe nomumwe.
11 Hakuna unonzwisisa, hakuna unotsvaka Mwari.
12 Vakatsauka vose, vakava vanhu vasina maturo, hakuna unoita zvakanaka, kunyangwe nomumwe chete;
Pauro anozvisanganisa zvakare mukutaura kwake uku kunoti munyama ino sevanhu hatina zvizhinji zvatinoreva.
Asi aive muporofita mukuru akabuditsa pachena kuti Ishe vachauya sei nemhere nehwamanda kuzomutsa vari kumakuva uye kushandura vapenyu mukubwaira kweziso kuti vatitore tiyende tichinosangana naye mudenga.
I VAKORINTE 15:52 Pakarepo, mukubwaira kweziso, nehwamanda yekupedzisira, nokuti hwamanda icharira, ipapo vakafa vachamutswa mukusavora; nesu tichashandurwa.
17 Zvino isu vapenyu, vakasara, tichatorwa pamwechete navo mumakore, kuti tichingamidze Ishe mudenga; naizvozvo tichave naShe nguva dzose.
Saka zvisinei nekusarurama kwedu, Mwari vachiri kushandisa vanhu venyama kuti vashandire hurongwa hwavo hwakarurama.
Kuona kuti tese tiri vatadzi kunoita kuti tisatongere vamwe pakubata kwavo.
4. Johane Muzaruriri
Bhuku raZvakazarurwa chiporofita chiri padanho repamusoro soro. Mutumwa akauya pasi kuzotsanangurira muporofita Johane. Kubva pazviratidzo izvi Johane anokwanisa kuverengwa pamaporofita makuru.
Asi akatadza kaviri, mukubudirira kwekukasika pakunamata mutumwa.
VAKOROSE 2:18 Munhu ngaarege kuvapo unokutorerai mubairo wenyu nemavune, nekuzvininipisa nokunamata vatumwa, achivimba nezvaakavona, achizvikudza pasina nokufunga kwenyama,
Yambiro iyi kubva kuna Pauro yaireva kuti Johane angadai aiziva zviri nani.
Zvisinei nekukura kwezaruriro yatinowana kubva kune mumwe munhu, usafe wakaedzwa kusvika pakunamata munhu iyeye. Namatai Jesu ega.
ZVAKAZARURWA 1:1 Zvakazarurwa zvaJesu Kristu, zvaakapiwa naMwari, kuti aratidze varanda vake zvinhu izvo zvinofanira kukurumidza kuitwa; akazvituma nemutumwa wake, ndokuzivisa muranda wake Johane.
ZVAKAZARURWA 19:10 Ipapo ndakawira pasi pamberi petsoka dzake, kuti ndimunamate. Akati kwandiri; Rega kudaro, nekuti ndiri muranda pamwe chete newe nehama dzako dzinobata kupupura kwaJesu; namata Mwari, nokuti kupupura kwaJesu ndiwo mweya wokuporofita.
Bhaibheri rinopedzisira nemuporofita Johane achida kunamata mutumwa.
Iyambiro kwatiri kuti munguva yekupedzisira mweya uyu uchave uriko. Usakwidziridze mumwe munhu. Saka Mwari vakashandisa kukanganisa kwaJohane kutiyambira kuti tibve pakunamata munhu.
Asi kukanganisa uku hakuna kubvira kwamisa kuzarurwa kwechiporofita chaJohane. Kuratidzwa kwake kwakasvika kuAmagedhoni nedziva remoto rinova magumo erwendo rwevanonamata chikara (chiCatholic chisimo mumaGwaro) nemifananidzo yake (vemasangano akabuda mairi vakatevedzera mazano nemirairo yakaiswa nemusoro wemunhu). Saka kune mibairo yakaomarara kana vanhu vakanamata munhu nekutevera mazano ake panzvimbo pekutevera maGwaro.
ZVAKAZARURWA 22:8 Ini Johane, ndini ndakanzwa, ndikavona izvozvi. Zvino ndakati ndichinzwa, nokuvona, ndikawira pasi kuti ndinamate pamberi petsoka dzomutumwa wakandiratidza izvozvi.
9 Akati kwandiri: Rega kudaro; ndiri muranda pamwechete newe, nehama dzako, vaporofita, navanochengeta mashoko ebhuku iyi; namata Mwari.
Johane akadzokorora zvakare kukanganisa kwake zvisinei nekutsiurwa kwake kwekutanga. Asi hazvina kutadzisa kuti aratidzwe chikamu chekupedzisira chechiporofita chake chinoshamisa. Johane haana kubviswa kubva pakuva muporofita nekuda kwekuita kukanganisa kwakaipisisa kaviri.
Shadhireki, Misheki, naAbhedhi-nigo vakaramba kupfugamira chiumbwa chemuporofita mukuri, Danieri. Vakasarudza kukandwa mugomba remoto rinotyisa muhupenyu huno pachinzvimbo chehupenyu hunouya. Saka kukanganisa kwaJohane hakuzi chinhu chakanaka kurutivi rwake. VaHebheru vatatu vaive kuBabironi vakanga vasiya mufananidzo wakanaka. Johane angadai aiziva zviri nani.
Asi Mwari vakashandisa kukanganisa kwakaipisisa kuviri kwakaitwa naJohane seyambiro kwatiri. Musanamata munhu. Musanamata muporofita. Musanamata mutumwa. Panguva yekupedzisira Satani achaparadzira mweya wekuti vanhu vanamate mumwe munhu.
Musanyengedzwe nekurasisa uku.
Zvakare musabvise Johane kubva pakuva muporofita nekuti akakanganisa kaviri. Zvisinei nekukanganisa kwake, zvese zvaakaporofita mubhuku raZvakazarurwa zvichazadziswa.
Chii chatadzidza kubva pachidzidzo ichi? Vanhu vanotadza asi Mwari anoramba achivashandisa zvakadaro. Saka tinofanira kudzidza kupatsanura Chokwadi kubva pakutadza (Muti weHupenyu wakarukaniswa neMuti Wekuziva) worasa kutadza wobatirira pachokwadi. Avo vanorasa chokwadi nekuda kwechakaipa, vakafanana nemurapi anouraya murwere wake nekuti chibereko chake chaive chiine hutachiona chakaora. Murapi akanaka anotonga kuti chii chakaipa obvisa chikamu chakaipa chete. Kana chikamu chakaipa, chibereko, chikabviswa murwere anopona. Kudaidza murwere kuti akaora nekuti akaora nekuda kwekuti chibereko chake chakaora kutonga kwakaipa.
Kuvhara. Johane akatadza kaviri semunhu, asi aive muporofita anoshamisa. Zvaakaporofita zvaive zvakanaka zviri pane zvakanakisa zvezviporofita. Nekuti chiporofita chake chichiri kuzadziswa mukati menguva dzemakereke manomwe uye kuti chiporofita chake chezvichauya chinotaura nezveKutambudzika kukuru, Mereniyamu uye Musha wedu Usingaperi zvese zvichazadziswa zvese zvichava chapupu chekuti akabata hushumiri hwake hwechiporofita zvakanakisa sezvaaidiwa kuti aite naMwari. Asi akakanganisa kwazvo kaviri. Tinobvuma. Hatitarisirwi kumurambira hatifaniri kumuvhariridzira, izvozvo zvinonyatsoreva kuti aitokanganisawo semunhu wenyama. (Zvinongoreva kuti angori munhu semi neni.) Zvakapindira pakugona kwake kuporofita here? Kwete. Zvakamumisa kuenderera mberi nehushumiri hwake hwechiporofita here? Kwete.
Tinobatsirwa nechiporofita chake uye tinodzidzawo kuti tisadzokorore zvaakakanganisa.
Zvinotipa basa rekuti tizive musiyano pakati pechokwadi nekutadza. Kutadza ndiko kubva mumaGwaro. Saka tinofanira kuziva maGwaro kuitira kuti tizive patinenge tabva maari.
5. Tarisai muporofita mukuru Johane Mubhabhatidzi.
Akazivisa Mesiah asi paakanga ave muhusungwa kuona kwake kweMweya kwakapera, akakakavara kuti Jesu aive ari Mesiah zvechokwadi. Kwaive kukanganisa kukuru.
RUKA 7:19 Johane akadana vadzidzi vake vaviri, akavatuma kuna Jesu neShoko rokuti: ko ndimi iye wakanga achinzi unouya here, kana tichakatarisira mumwe?
20 Zvino varume vachisvika kwaari vakati: Johane Mubhabhatidzi wakatitumira kwamuri neshoko rokuti: Ko ndimi iye wakanga achinzi unovuya here? Kana tichakatarisira mumwe?
Jesu angadai akaendera Johane akamuita kanyama kanyama. Johane akanga atadza kwazvo.
Saka Jesu akatonga Johane here nekumubvisa kubva pakuva muporofita nekuda kwekukanganisa kwaakanga aita? Kwete. Jesu akaregerera Johane nekuda kwezvaakanga akaita zvinozadzisa maGwaro. Johane akanga asiya zvido zvake nerusununguko rwake, akararama hupenyu hwakaomarara murenje kuitira kuti azivise Mesiah. Jesu aive akasarudza Johane kuti amubhabhatidze uye amuratidze kunyika. Mwari vanorangarira zvose zvatinovaitira . Saka Jesu anotaura nenzira yepamusorosoro nezvekudokwairira kwaJohane kuzadzisa maGwaro anotaura nezvehushumiri hwake.
Saka Jesu akaita sei pamusoro pekukanganisa kukuru kwaJohane?
Nekumunzwira kukuru nehunyoro akangokanganwira kutadza kwaJohane.
RUKA 7:24 Nhume dzaJohane dzakati dzabva, akatanga kuvudza vanhu vazhinji pamusoro paJohane, akati: Makanga mabuda kundovonei kurenje? Rutsanga runozununguswa nemhepo here?
26 Asi makanga mabuda kundovoneiko? Muporofita here? Hongu, ndinoti kwamuri; unopfuura zvikuru muporofita.
27 Uyu ndiye wakanyorwa pamusoro pake, zvichinzi: Tarira ndinotuma munyai wangu pamberi pako.
Jesu akakanganwa kukanganisa kwaJohane akadzokera kumaGwaro akanga azadziswa naJohane. Nekuzadzisa maGwaro, Johane akanga atokwana Momuono Mukuru waMwari. Akanga afamba mukufamba kweMweya kunofamba zvisingaonekwi mukati mekurarama kwevanhu kuchibata vanhu vakasarudzika, vatendi vechokwadi vanokwanisa kufamba pamwe nako. Kufamba uku kunoitika chete munzira yemaGwaro. Kunofambisa chete vanotenda kuBhaibheri. Saka Johane aive azadzisa chiporofita chekuTestamente Yekare chaitsanangura pamusoro pake. Jesu akamurumbidza naizvozvo. Kukanganisa kwaakaita kwaive kusiri chikamu chechiporofita. Izvi zakangokanganikwa nyore akarumbidzwa nekuzadzisa maGwaro aireva iye.
RUKA 7 :28 Ndinoti kwamuri: Kuna vakaberekwa navakadzi, hakuno mukuru kuna Johane Mubhabhatidzi: asi muduku muushe bwaMwari mukuru kwaari.
Kuvhara: chinhu chakanyanya kukosha chatingaite nhasi uno kuzadzisa maGwaro anotaura nezvenguva yekupedzisira. Hurongwa huri muBhaibheri ndihwo muono mukuru waMwari. Hupenyu hwedu hunofanira kufamba neMweya waMwari usingaonekwe uri kubuditsa pachena kuti kereke yakarasikirwa sei neChokwadi Munguva yeRima ikatanga kudzoswa kuhurongwa hweBhaibheri kuti kufamba kweMweya kwave kutora vatendi vechokwadi kuchivadzosera kuTestamente Itsva, kuvadzosera kuBhuku raMabasa avapositora.
6. Simoni Petro
Nemufaro akadya nemaHedheni asi aitya kumhura vaJuda vakauya kuzomushanyira saka akasarudza kudzivirira kuswedera pedyo nemaHedheni panguva dzekudya. Akafunga kuti zvaizofadza maJuda. Aitotadza zvachose. Aiedza kurarama nekutemda kwevamwe vanhu. Pauro akamugadzirisa.
Mafungiro aPetro panyaya iyi aive akarasika zvachose,
12 Nokuti vamwe, vakanga vabva kuna Jakobo, vasati vasvika, iye waidya navahedheni; asi vakati vasvika, akadzoka, akazviravura, achitya vakadzingiswa.
Kuvhara: paridzai maGwaro sezvaari. Musaise mafungiro enyu pamusoro wenyaya unenge wapihwa.
Kukanganisa uku kwakabvisa Petro kuti asave muporofita here? Kwete. Pedyo nekumapeto kwehupenyu hwake akaporofita chiporofita chakadzama pamusoro penguva yekupedzisira.
II PETRO 3:10 Asi zuva raShe richauya sembavha; vusiku naro denga richapfuura nokutinhira kukuru, nezvedenga zvichaparadzwa zvichipiswa, nenyika namabasa ari mairi achapiswa.
II PETRO 3:3 Pakutanga muzive zvenyu chinhu ichi, kuti pamazuva okupedzisira vaseki vachauya vachiseka, vachifamba nokuchiva kwavo.
4 Vachiti: Chipikirwa chokuvuya kwake chiripiko zvino? Nokuti kubva pakuparara kwamadzibaba, zvinhu zvose zvinongoramba zvakaita sezvazvakanga zvakaita kubva pakutanga kwokusikwa.
Kuvhara: muporofita chaiye anokwanisa kupa zano rakaipa zvichibva kwaari. Saka tarisisai zvese kuti zvabva mumaGwaro here.
7. Muporofita Natani
II SAMUERI 7:1 Zvino mambo wakati agere mumba make, Jehova amuzorodza pavavengi vake vose vakanga vakamupoteredza,
2 Mambo akati kumuporofita Natani, Zvino tarira, ini ndigere muimba yomusidhari, asi areka yaMwari igere pakati pemicheka.
3 Natani akati kuna mambo, Endai, muite henyu zvose zviri mumoyo menyu, nokuti Jehova anemi.
4 Zvino nohusiku uhwo shoko raJEHOVA rakasvika kuna Natani richiti:
5 Enda unoudza muranda wangu Davidi, uti, Zvanzi naJEHOVA: Iwe ungandivakira imba mandingagara here?
II SAMUERI 7:12 Kana nguva yako yasvika, iwe ukavata namadzibaba ako, ndichamutsa umwe werudzi rwako uchakutevera, uchabuda muura mako, ndikasimbisa ushe hwako.
13 Iye uchavakira zita rangu imba, neni ndichasimbisa chigaro chake choushe nokusingaperi.
Muporofita Natani akapa Davidi mhinduro kuri kufunga kwake kuti Davidi avake Temberi. Iri raive zano rakaipa. Soromoni ndiye aizovaka Temberi.
Kuvhara: Mafungiro emuporofita pachake haabatsiri uye haavimbiki maari.
8. Muporofita mutana neumwe muporofita
KuIsiraeri muporofita akachema kuna Jehova achichema nenyaya yechinamato chechipegani kuBheteri akaudzwa naMwari kuti asadye kana kunwa kana kudzokera nenzira yaambouya nayo.
I MADZIMAMBO 13:32 Nokuti izvo zvaakataura, paakadanidzira achirairwa naJEHOVA, kuaritari paBheteri, nokudzimba dzose dzamatunhu akakwirira, ari pamaguta eSamaria, zvichaitika zvirokwazvo.
I MADZIMAMBO 13:9 Nokuti JEHOVA wakandiraira neshoko rake, akati, Usadya zvokudya, kana kunwa mvura, kana kudzoka nenzira yawaenda nayo.
11 Zvino paBheteri pakanga pagere muporofita mutana; mwanakomana wake akanomuudza mabasa ose akaitwa nomunhu waMwari paBheteri pazuva iro, namashoko aakataura kuna mambo, naiwo vakaudzawo baba vavo.
13 Akati kuvanakomana vake, ndisungirei chigaro pambongoro; ivo vakamusungira chigaro pambongoro vakaitasva.
14 Akatevera munhu waMwari, akamuwana agere pasi pemuti muoki, ndokuti kwaari, ndiwe munhu waMwari wakabva kwaJuda here? Akati, Ndini.
15 Ipapo wakati kwaari, handei kumba kwangu undodya kwangu, undodya zvokudya.
16 Iye akati, handingagoni kudzoka nemi kana kupinda kwamuri, handingadyi zvokudya, kana kunwa mvura nemi pano.
17 Nokuti ndakarairwa neshoko raJEHOVA, akati, usadya zvokudya, kana kunwa mvurapo, kana kudzoka nenzira yawaenda nayo.
18 Ipapo akati kwaari, neniwo ndiri muporofita sewe; zvino mutumwa wakandiudza shoko raJEHOVA, akati, Dzoka naye kumba kwako, adye zvokudya nokunwa mvura. Akareva nhema kwaari.
19 Naizvozvo akadzoka naye, akandodya zvokudya mumba make nokunwa mvura.
20 Zvino vakati vagere patafura, shoko raJEHOVA rakasvika kumuporofita wakamudzosa,
21 Akadanidzira kumunhu waMwari, wakanga abva kwaJuda, akati, Zvanzi naJEHOVA, zvausina kuteerera muromo waJEHOVA, ukasachengeta murairo wawakarairwa naJEHOVA Mwari wako,
22 Ukadzoka, ukadya zvokudya ukanwa mvura ipapo paakati kwauri, Usadya zvokudya nokunwa mvura, naizvozvo chitunha chako hachingasviki muhwiro hwamadzibaba ako.
23 Zvino wakati adya zvokudya, nokunwa, akasungirira chigaro pambongoro, iye muporofita waakadzosa.
24 Zvino akati aenda, Shumba ikasangana naye munzira, ikamuuraya, chitunha chake chikakandirwa munzira, mbongoro ikamira nacho, uyewo shumba ikamira pachitunha.
Muporofita mumwechete haana kuteerera Mwari akafa. Saka muporofita anokwanisa kutadza kuteerera Mwari.
Akatenda kuti nuporofita mutana, semuporofita, aikwanisa kushandura Shoko raMwari. Kutadza uku kwakamutorera hupenyu hwake.
Muporofita mutana akataura nhema.
Kuvhara: musafa makatadza kuteerera Shoko raMwari. Kana muporofita akataura chimwe chinhu chakasiyana kubva pashoko raMwari usamuteerere kana kumutenda muporofita iyeye. Saka maporofita anokwanisa kutadza kwazvo. Muporofita anokwanisa kunyeba. Munofanira kufananidza neShoko raMwari, kwete kungotevera kutaura kwemuporofita.
9. Abhurahamu akanyeba paasina kutaura kuti Sarah mukadzi wake, kunyange aive hanzvadzi yake paropa, akapotsa amusvibisa nekutendera mumwe murume kuti amuroore.
GENESISI 12:12 Kana vaEgipita vachikuona, vachati, Ndiye mukadzi wake, vachandiuraya, asi iwe vachakurega uri mupenyu.
13 Uti hako uri hanzvadzi yangu, kuti ndiitirwe zvakanaka nekuda kwako, kuti mweya wangu urarame nokuda kwako.
18 Zvino Farao akadana Abrahama akati, Chiiko ichi chawakandiitira? Wakaregerereiko kundizivisa kuti mukadzi wako?
19 Wakarevereiko uchiti, Ihanzvadzi yangu? Naizvozvo ndakamutora kuti ave mukadzi wangu; naizvozvo hoyo mukadzi wako, mutore, uende hako.
Iyi yaive mhosva huru. Sarah aive mudziyo uyo waifanirwa kuuya nerudzi rwehushe hwaMesiah. Dai akasvibiswa namambo weEgipita, hurongwa hwaMwari hwese hwaizopinda musango.
Abhurahamu akataura zvakare nhema dzimwechete idzi achiti Sara aive hanzvadzi yake paropa asingatauri kuti aive mukadzi wake.
GENESISI 20:1 Zvino Abhurahamu wakabvapo, akaenda kunyika yenyasi, akandogara pakati peKadhesi neShuri; akava mutorwa muGerari.
2 Abhurahamu akati pamusoro paSarah, mukadzi wake, Ihanzvadzi yangu. Abhimereki, mambo weGerari, akatuma vanhu kundotora Sarah.
11 Abhurahamu akati, Nokuti ndakati, Zvirokwazvo havatyi Mwari panzvimbo ino; zvimwe vachandiuraya pamusoro pomukadzi wangu.
Zvisinei nekukangaisa kukuru uku, Mwari akaudza Abrahama kuti apire Isaka pagomo rimwechete paizovakirwa Temberi. Zvino kuseri kwake kuGomo reCalvari, Abrahama akaona chipiriso chaifanira kupirwa pachinzvimbo chaIsaka. Ichi chaive chiitiko chaienderena nekufa kwaJesu.
Saka Abrahama, zvisinei nekusiya mukadzi wake kune umwe murume achida kuzvidzivirira kurufu, akazoshandiswa naMwari kuratidzira chibairo chikuru chaizoitwa kuhupenyu hwevanhu.
10. Josefa akanyepa achiudza baba vake nevakoma vake kuti vasataure kuti vaive vafudzi.
GENESISI 46:31 Zvino Josefa akati kuvana vababa vake neveimba yababa vake, ini ndichakwira kudoudza Farao, ndichiti kwaari, Vana vababa vangu, neveimba yababa vangu, vaigara kunyika yeKenani, vasvika kwandiri.
32 Varume ava vafudzi, nokuti vaipfuwa zvipfuwo; vauya namakwai avo nemombe dzavo nezvose zvavanazvo.
33 Zvino kana modanwa naFarao, akati, 'Basa renyu nderei?'
34 Muti, 'Varanda venyu vaive vapfuwi vezvipfuwo kubva paucheche hwedu kusvika zvino, isu namadzibaba edu;' kuti mugare munyika yeGosheni, nokuti vafudzi vose vanonyangadza vaEgipita.
GENESISI 47:2 Akatora varume vashanu kuvana vababa vake, akavaisa pamberi paFarao.
3 Farao akati kuvakoma vake, Basa renyu ndereiko? Vakati kuna Farao, Varanda venyu vafudzi isu namadzibaba edu tose.
Vakoma vake vakamuudza chokwadi. Josefa akanyepa asi akazoporofita pamusoro pekubuda kwevaJuda muIjipita rimwe remazuva akavaudza kuti vatakure mapfupa ake kana voenda vaendewo nawo. Nekuita uku akaporofita zvakare kumuka kwaizoita vatsvene mushure mekumuka kwaJesu kubva kuvakafa. Aidawo kuti mapfupa ake aveko uko kwaizomukira Jesu kubva kuvakafa.
Mwari vakataurira Jeremia kuti asaende kuEgipita. Asi iye akakurudzirwa kuendako saka haana kuteerera Mwari saka akanga asisiri muhurongwa hwaMwari.
JEREMIA 42 :19 JEHOVA vakataura pamusoro penyu, imi vakasara vaJuda, achiti, 'Regai kuenda Egipita; zivai kwazvo kuti ndakakupupurirai nhasi.'
JEREMIA 43:5 Asi Johanani mwanakomana waKarea, navakuru vose vehondo, vakatora vose vakasara vaJuda, vakanga vadzoka kumarudzi ose kwavakadzingirwa, vachida kugara vari vatorwa munyika yaJuda.
6 Vaiti, varume navakadzi, navana navakunda vamambo nomunhu upi noupi akanga asiiwa naNebhuzaradhani mukuru wavarindi kuna Gedharia mwanakomana waAhikami, mwanakomana waShafani, pamwechete naJeremia muporofita, naBharuki mwanakomana waNeria,
7 Vakandosvika kunyika yeEgipita; nekuti havana kuteerera inzwi raJEHOVA; vakandosvika Tapanesi.
Jeremia akazvipira kuita hurongwa hwevanhu uye kutevera hutungamiriri hwehudzvanyiriri hwaJohanani. Akabva pahurongwa hwaMwari akazoporofita zvaishamisa kuti Babironi haizovakwizve. Sadamu Hussein akaedza kuvakazve Babironi asi hondo mbiri dzeIraki dzakabva dzamumisa. Iraki yakazotangazve kuvaka Babironi pakarepo chikwata chematerorisiti cheISIS chakasvika panzvimbo kuvaka kukabva kwamira zvakare sezvo mari yese yakabva yashandiswa kune zvehondo kuti vaedze kukunda ISIS.
JEREMIA 50 :35 Munondo uri pamusoro pavaKaradhea, napamusoro pavagere Babironi, napamusoro pamachinda aro, napamusoro pavachenjeri varo ndizvo zvinotaura JEHOVA.
39 Naizvozvo zvikara zvamarenje zvichagaramo, pamwechete namapere, nemhou dzichagaramo; hapangazogarwi nekusingaperi, hakuna ungagaramo kusvikira kumarudzi namarudzi.
Kuvhara: Muporofita anokwanisa kurasiswa nzira nevanhu vakamupoteredza. Muporofita anokwanisa kubuda muhurongwa hwaMwari orega kuita zvataurwa naMwari. Asi anoramba ari muporofita anokwanisa kushandiswa naMwari.
EZEKIERI 3 :14 Ipapo Mweya wakandisimudza, ndokundibvisapo; ndikaenda ndiine shungu, mweya wangu wakatsamwa; ruoko rwaJEHOVA rwakanga ruri pamusoro pangu nesimba.
Hurongwa hwaMwari hwakanakisa (Muono Mukuru waMwari) hunokwanisa kuva hwakasiyana kwazvo nehurongwa hwedu isu vanhu venyama (muono wedu unongofunga nezvedu chete) zvekuti kana Mwari vakamanikidza muporofita kuita chimwe chinhu kuti azadzise hurongwa hwaMwari hwakanaka, muporofita anova nekutsamwa nekugunun'una kukuru kwaanoedza kubvisa kwaari.
JONA 1:1 Zvino shoko raJEHOVA rakasvika kuna Jona mwanakomana waAmitai, richiti,
2 Simuka uende Ninivhe, riya guta guru, undoparidzira, nokuti kuipa kwavo kwakwira pamberi pangu.
3 Asi Jona akasimuka achida kutizira Tashishi abve pamberi paJEHOVA; akaburukira Jopa, akawana chikepe chakanga choenda Tashishi, akabudisa mari yacho yokufamba, ndokupinda mukati macho, kuti aende navo Tashishi abve pamberi paJEHOVA.
Muporofita akaudzwa kuti aende kuNinivhi akaramba kuteerera nebwone akaenda rumwe rutivi rwegungwa.
JONA 3:10 Mwari akaona zvavakaita, kuti vakatendeuka panzira yavo yakaipa, Mwari vakazvidemba pamusoro pezvakaipa zvaakati ndichavaitira; akasazviita.
JONA 4:1 Asi zvakaodza moyo waJona kwazvo, akatsamwa.
(VaAsiria vaive vanhu vakaipa kwazvo. Jona aida kuti vafe semubairo wairingana nekuipa kwavo kwakanyanyisa)
Asi vakateerera kuparidza kwaJona vakatendeuka. Izvi zvakamutsamwisa sezvo aida kuti guta rakaipa iri riparadzwe.
JONA 4 :8 Zvino zuva rakati richibuda, Mwari akaraira mhepo inopisa inobva mabvazuva; zuva rikabaya musoro waJona, akaziya akakumbira kuti afe hake, akati, Zviri nani kwandiri kuti ndife pakuti ndirarame.
Jona aive abva pamberi paMwari. Akakoshesa kuda kwake (vanofanira kufa ini ndinofanira kusununguka ndiri pabvute) kukunda kuda kwaMwari kwakakosha kwekuti vasingatendi vaponeswe.
JONA 4 :11 Ko zvino ini handizaifanira kuva netsitsi neNinivhe, riya guta guru, muna vanhu vanopfuura zviuru zvine zana namakumi maviri, vasingazivi kuti ruoko rwavo rworuboshwe ndorupi, uye zvipfuyo zvizhinji here?
Kuvhara: Mwari vakashandisa muporofita airwisa asingade kuti vanhu vatendeuke kuTestamente Yekare.
Tingabvise Jona semunhu. Aive atadza kwazvo mukufunga nemukuita kwake. Asi mune zvaakazadzisa akatiisa isu tese mubvute. Ndiani umwe akambotendeutsira guta rese rine vanhu 120 000 kuna Mwari? Aive asina mamaikirofoni, asina mabhendi makuru kana nhandare huru kuti abatsirike. Akanga asina komiti inomurongera zvinhu, asina maasha anotambira nekugarisa vanhu. Uye Asiria ndiyo nzvimbo yaive nevanhu vanozivikanwa nekurwa pane dzimwe nzvimbo dzese. Hutsinye hwavo kuvavengi vavo hwaityisa. Jona aifanira kutarisana nevanhu vakaita kunge zvikara ava ari ega. Tinoona kutadza kwake kwaive kuzhinji, asi Mwari vakaona hushingi hwake hwakakurisa.
Chidzidzo: Musapedza nguva yakareba muchitsvaga kukanganisa mumuporofita. Kukanganisa kuriko asi Mwari anoona kukwanisa kwake kuzadzisa zvaatumwa, kwete kukanganisa kwake. Kana muporofita nechero ipi nzira, akazadzisa Muono Mukuru waMwari akaita kuti Kuda kweMweya waMwari wakavanda utsvaire uchisvika kure semhepo inoparadza isingaonekwi mukati mezviitiko zvehupenyu hwedu vanhu, Mwari vanofara nemuporofita iyeye vokanganwa zvese zvaakakanganisa. Vatendi vanokwezva nezvinhu zvinonatswa nemuporofita pamaGwaro sezvo zvichifamba nechikamu ichocho chemaGwaro chinozadzisa zuva redu, kuti tifambe tichienda kuna Mwari. Kumira kumiganhu yeparutivi nekuwana zvipomero papotswa nemuporofita hazvina kwazvinotisvitsa.
EKSODO 17:5 JEHOVA akati kuna Mosesi, tungamira pamberi pavanhu, uende navakuru vaIsiraeri, utore tsvimbo yako yawakamborova rwizi nayo muruoko rwako uende.
6 Tarira, ndichamira pamberi pako padombo riri paHorebi, urove dombo iro, mvura ichabuda pariri, vanhu vagonwa. Mosisi akaita saizvozvo pamberi pavakuru vaIsiraeri.
Dombo raive Kristu. Akanga akafa paCalvari parutivi pake pakabuda mvura, chiratidzo chehupenyu hunoshamisa hunopa Mweya Mutsvene waMwari wakabuditswa pakufa kwake ukaererera mukereke pazuva rePentecositi.
Asi zve hurongwa hwaMwari kuti titambudzike nekusangana nekuomerwa pamwe nemakomborero. Vanhu vakatevera Mosesi vachifara pavakakomborerwa asi vakarwisa pavakaomerwa.
Vanhu vakagunun'una vakapomera Mosesi vachiti anoreva nhema uye aivatungamirira kurufu murenje regwenga.
NUMERI 20:3 Vanhu vakarwa naMosesi (vachimupopotera), vakataura vachiti, Dai takafa zvedu nguva yakafa hama dzedu pamberi paJEHOVA.
4 Makauyisireiko ungano yaJEHOVA murenje rino, kuti tifiremo, isu nezvipfuwo zvedu?
Kwaive nekuomerwa kuzhinji kuvaJuda. Vakaiona senzvimbo yakaipa. Pasina mvura murenje.
NUMBERS 20:5 Makatibudisirei muEgipita, kuzotiisa panzvimbo iyi yakaipa? Haizi nzvimbo yembeu, kana yamaonde, kana yemizambiringa, kana yamatamba; nemvura yokunwa hapana.
8 Tora tsvimbo uunganidze ungano, iwe naAroni mukuru wako, mutaure nedombo pamberi pavo, kuti ribudise mvura padombo, unwise ungano nezvipfuwo zvavo.
NUMERI 20:10 Mosesi naAroni vakaunganidza ungano pamberi pedombo, akati kwavari, Zvino, chinzwai, imwi vekumukira Jehova; ko tingakubudisirai mvura padombo iri here?
11 Ipapo Mosesi akasimudza ruoko rwake, akarova dombo kaviri netsvimbo yake, mvura ikabuda zhinji-zhinji, ungano ikanwa, nezvipfuwo zvavo.
Hunhu hwavo hwekumukira nekugunun'una hwakabata Mosesi. Pakutanga aifanira kurova dombo. Saka panzvimbo yekutaura nedombo akarirova zvakare. Munhu wenyama, tinogara tichiwira mune zvakare zvatajaira. Hapana zvakaitika nekuti aive asina kuteerera Mwari. Akamanikidzika nekuda kwevanhu vaive vamukira Mwari akaita kukanganisa kukuru akarova dombo zvakare. Mvura yakabuda. Akafadza vanhu. Asi aive asina kuteerera Mwari aive ava munjodzi huru. Mubairo wake waive wekuti aisazopinda munyika yechipikirwa. Nei?
NUMERI 20:12 Ipapo JEHOVA akati kuna Mosesi naAroni, Zvamusina kutenda kwandiri, kunditsaura pamberi pavanhu vaIsraeri, hamungapinzi ungano iyi munyika yeKenani yandakaipa.
Dombo raive ramborohwa kamwe chete. Zvinomiririra kurovererwa kwaKristu paCalvari. Zvino Testamente Itsva yakatanga tese tikatenderwa kutaura neBhaibheri kune zvese zvatinoda nemibvunzo yedu toteerera kumaGwaro achitipindura. Kana tikakwanisa kuteera mhinduro mumaGwaro akasiyana siyana, tinobva taziva kuti Mwari vataura nesu seUrimi tumimi yaive matombo anokosha gumi nemaviri aive panguvo yechipfuva chaAroni aipenya nemoto mutsvene kana chiporofita chechokwadi chataurwa pamberi pawo.
Zvino Mosesi akanganiswa mafungiro nemaitiro evanhu vaimumukira saka pachinzvimbo chekutaura nedombo akarirova kaviri. Izvi zvinomiririra Kristu achirovererwa seMunhu paCalvary uye Jesu, seShoko raMwari, akarovererwa pakanzuru yeNicea mugore 325 AD apo maGwaro akarambwa akatsiviwa nemifungo yevanhu venyama vakaisa Tiriniti mupfungwa dzevanhurume nevakadzi. Kereke yeRoman Catholic yakaita wanano inosemesa yezvematongerwo enyika nechitendero haifi yakatenderwa kuDenga. Izvi zvakaitwa muhupenyu hwaMosesi. Akarova dombo kaviri zvichireva kuti akarovera Kristu seMunhu uye seShoko raMwari. Saka akaita chikamu cheRoma. MaRoma akaroverera Kristu kereke yeRoman Catholic ikaroverera Shoko paNecea apo zvakatora kukosha kutenda zvinotaura munhu kupinda zvinotaura Bhaibheri. Saka sekereke yeRoman Catholic, Mosesi haana kutenderwa kupinda munyika yechipikirwa (Denga).
Kuvhara: muporofita mukuru anobata nekubata kukuru anokwanisa kusateerera Mwari okonzereswa nekumanikidza kwevanhu kuzadzisa kuda kwemuvengi. Maporofita vanhu sesu uye vanokwanisa kumanikidzwa nezvido zvevanhu pachinzvimbo chekuteerera Mwari. Asi zvakadaro angori maporofita.
Iwe neni tinofanira kutarisa pavakateerera Mwari topapatsanura nepavakaita kuda kwavo. Hatifaniri kutevera kuda kwemuporofita. Tinoteerera muporofita kana achitaura kana kuti achitizivisa Shoko raMwari.
JOSHUA 1:1 Zvino Mosesi muranda waJEHOVA, wakati afa, JEHOVA akataura naJoshua, mwanakomana waNuni, muranda waMosesi, akati,
(“Mwari vakataura naJoshua” mutsara wakadzokororwa kanokwana kuita ka 13. maporofita anonzwa kubva kuna Mwari. Kuporofita kwaJoshua kwaive nechokuita neramangwana raiuya pakarepo revaIsraeri. Vaizokunda kutora nyika yose yavaive vavimbiswa. Hapana aizokwanisa kumira pamberi paJoshua. Akava mumwe wevakuru vehondo akabudirira kwazvo munhoroondo asina kubvira akurirwa)
2 Mosesi, muranda wangu wafa; zvino simuka iwe uyambuke Jorodhani urwu, iwe navanhu ava vose, muende kunyika yandinovapa ivo vana vaIsraeri.
3 Nzvimbo imwe neimwe ichatsikwa netsoka dzenyu ndakakupai iyo, sezvandakataura naMosesi.
4 Kubva murenje reRebhanoni iri kusvikira parwizi rukuru, irwo rwizi Yufuratesi, nenyika yese yavaHeti, kusvikira kugungwa guru, kurutivi rwamavirazuva, ndiyo nyika yenyu.
5 Hakuna munhu achagona kumira pamberi pako mazuva ose ohupenyu hwako; ndichava newe sezvandaisiva naMosesi; handingakurege kana kukusiya.
Joshua aifanira kuuraya vanhu vakaipa vaigara munyika yechipikirwa. Asi akanyengerwa nevamwe vakauya vakapfeka nguvo sharu vakamuudza kuti vanobva kunyika iri kure kwazvo.
JOSHUA 9:3 Asi vanhu veGibhiyoni vakati vachinzwa zvakanga zvaitirwa Jeriko neAi naJoshua,
4 Vakatsvaka mano, vakaenda senhume, vakaenda nehomo dzakasakara pamusoro pembongoro dzavo, nehombodo dzewaini dzakasakara, dzakanga dzakaparuka, nekusonanidzwazve;
5 Neshangu dzakasakara, dzaive nezviremo patsoka dazvo, nenguvo dzakasakara; zvingwa zvavo zvose zvembuva yavo zvakanga zvakaoma nokuvhuvha.
6 Vakaenda kuna Joshua kumisasa paGirigari, vakati kwaari nekuvarume vaIsraeri, Tinobva kunyika iri kure; naizvozvo itai sungano nesu zvino.
JOSHUA 9:14 Ipapo varume vakatora zvimwe zvembuva yavo, vasingabvunzi muromo waJEHOVA.
15 Joshua akayanana navo, akaita sungano navo kuti vachavaregera vari vapenyu; machinda eungano akapika kwavari.
Saka vakanyengera Joshua.
JOSHUA 10:12 Zvino Joshua akataura naJEHOVA nomusi JEHOVA waakaisa vaAmori mumaoko avana vaIsraeri, akati pamberi pavaIsraeri, Iwe zuva mira pamusoro peGibhiyoni, Newe mwedzi pamupata waAjaroni.
13 Zuva rikamira, nomwedzi ukarambirapo, Kusvikira rudzi rwatsiva vavengi varwo. Izvi hazvina kunyorwa here mubhuku yaJashari? Zuva rikaramba rimire pakati pedenga, rikasakurumidza kuvira nguva yakaita sezuva rose.
14 Hakuna kumbova nezuva rakadaro kubva pakutanga kana shure kwaro, Kuti JEHOVA wakateerera izwi romunhu; nokuti JEHOVA wakarwira vaIsraeri.
Zvisinei nekunyengerwa, Joshua akamira navo apo vaAmoraiti vakarwisa Gibhiyoni uye Joshua akauraya vaAmoraiti akakumbira Mwari kuti varebese zuva kuti vapedze kurwa. Zuva rikamira kuita uku hakuna kukwikwidzwa mukurarama kwevanhu.
Akaita hupombwe nemukadzi wemunhu akauraisa murume wacho kuti avige mhosva yake.
Mungawane kumwe kutadza kunopinda uku here?
Asi tarirai kunaka kwechiporofita chaDavidi. Zvisinei nekutadza kwake Mwari vakashandisa Davidi kuporofita zvinoshamisa pamusoro pekurovererwa kwaJesu nekuti Mwanakomana waDavidi ndiko kudaidzwa kuchaitwa Jesu munguva yeMereniyamu. Nyeredzi yaDavidi ndiyo mureza wevaJuda uye nhasi uno ndiwo mureza wagarisa uchishandiswa pasi rese.
Davidi akataurwa kanokwana kuita ka930 muBhaibheri, kakawanda kukunda mamwe mazita ese. Zita rekupedzisira rakataurwa muChaputa yekupedzisira muBhaibheri, Zvakazarurwa 22, ndiJesu. Zita rechipiri kubva kuzita rekupedzisira ndiDavidi.
ZVAKAZARURWA 22:16 Ini Jesu ndakatuma mutumwa wangu kuti akupupurirei izvozvo pakereke. Ndini mudzi werudzi rwaDavidi, nyamasase inopenya.
MAPISAREMA 22:1 Pisarema raDavidi. Mwari wangu, Mwari wangu, mandisiireiko? Munomirireiko kure pakundibatsira, (Kuchema kwaJesu pamuchinjiko).
MAPISAREMA 22:16 Nokuti imbwa dzakandikomberedza; (maHedeni, vaRoma) ungano yavanoita zvakaipa yakandipoteredza; vakaboora maoko angu namakumbo angu; (zvipikiri pamuchinjiko)
MAPISAREMA 22:18 Vanogovana nguvo dzangu pakati pavo, vanokanda mijenya pamusoro pehanzu yangu.
(VaRoma vana vakabvarura nguvo dzake kuita zvidimbu zvina vakakanda mijenya pamusoro pehanzu yake yavaive vasingade kubvarura).
MAPISAREMA 147:10 Haafadzwi nesimba rebhiza; haafariri makumbo emurume.
Ichi chiporofita chakanakisa. Antikristu kuna Zvakazarurwa Chaputa 6 aitasva mabhiza matatu akasiyana akazomabatanidza kuva rimwechete rakacheneruka, rine ruvara rwechitunha. Saka simba rebhiza rinoratidzira simba remweya waAntikristu. Hatingashamiswe kuti nei Jesu akatasva mbongoro kupinda muJerusarema.
Makumbo emufananidzo wechiratidzo chaDanieri aive akaitwa nedare achimiririra hushe hweRoma hwekuMabvazuva nekuMadokero. Akazoita tsoka dzaive nechikamu chedare (sangano rekereke yeRoman Catholic) chakasangana nevhu (kereke yechokwadi. Mirivo nemiti zvinokwanisa kukura muvhu. Saka ivhu ndicho chega chikamu chiri pamufananidzo wemuHedeni chingatipe hupenyu. Tsoka dzinomiririra nguva dzemakereke manomwe. Kuipa kuri munguva dzose dzemakereke, zvikamu zvedare, kunobva pakubata kwakaipa kwemakumbo edare, hushe hweRoma nezvakavanzika zvahwo zvechipegani chekuBabironi nekuuraya kwavo kwavaiita maKristu nekunamata Caesar kwaive kusimudza munhu kuti ave pamusoro pevamwe vanhu). Saka makumbo emunhurume kubata kwechipegani chekuRoma. Saka zvakanaka kuti varume vapfeke mabhurugwa marefu anovhara makumbo avo.
Pisarema rinotevera rinoporofita nezvekumuka nekuenda kwaJesu nevatsvene vekuTestamente Yekare kudenga pamwechete.
MAPISAREMA 24:7 Simudzai misoro yenyu, imi masuo; musimudzwe imi, magonhi akare-kare; kuti mambo wokubwinya apinde. (kudanidzira kwemasuo emuTestamente Yekare)
8 Ndiyani iye mambo wokubwinya? (Vatumwa vanochengeta masuo edenga vanobvunza vasati varega chero munhu achipinda). Ndiye JEHOVA ane simba noumhare, Iye JEHOVA anoumhare pakurwa. (Mhinduro yavatsvene).
9 Simudzai misoro yenyu, imi masuo; muisimudze, imi magonhi akare-kare; kuti mambo wokubwinya apinde.
10 Ndiyani uyu mambo wokubwinya? (Vatumwa vanobvunza zve. Havanyengereki kunge isu vanhu venyama vanongoti zvese zvakanaka). JEHOVA wehondo, ndiye mambo wokubwinya. (Vatsvene vanodaira zve)
Kudenga kwakachengetedzwa nekuti zvese zvinonyatsotarisiswa ikoko.
MAPISAREMA 34:7 Mutumwa waJEHOVA anokomberedza vanomutya, nokuvarwira.
Chiporofita ichi chakachengetedza iwe neni nguva zhinji.
MAPISAREMA 40:7 Ipapo ndakati, Tarirai, ndauya; parugwaro rwakapetwa ndakazvirairwa,
Bhaibheri rine kuporofita kuzhinji kwakazadziswa naJesu pakushumira kwake ari pano pasi.
Humbowo hukuru hwekuti Jesu ndiye Mesiah ndehwekuti akazadzisa kuporofita kwese kwakaitwa pamusoro pake muBhaibheri.
MAPISAREMA 41:9 Haiwa kunyange shamwari yangu chaiyo, wandaivimba naye, aidya zvokudya zvangu, Naiye andisimudzira chitsitsinho chake.
Judasi akatora chikamu chechingwa pachidyo chehusiku hwekupedzisira akabuda kuenda kunotengesa Jesu.
MAPISAREMA 49:8 (Nokuti rudzikinuro rwemweya yawo runokosha, runofanira kuregwa nokusingaperi;)
Jesu akaripira kuponeswa kwedu kamwe chete, pamuchinjiko. Akabva ati “Zvapera”.
MAPISAREMA 68:18 Makakwira kumusoro (pazuva rekukwira kudenga) mukatapa vatapwa venyu (akatora vatsvene vese vemuTestamente Yekare kubva muparadhiso yeTestamente Yekare kwavaive vakatapwa akaenda navo kudenga.): makagamuchira zvipo pakati pavanhu (Mweya Mutsvene wakaburuka pazuva rePentecositi kuzopa zvipo zvemweya kuvanhu); zvirokwazvo pakati pavakakumukiraiwo (Mwari vakapa zvipo zvemweya kuvamwe vanhu vaivamukira. Mvura inonaya kune vose vakarurama nevasakarurama pamwechete), kuti JEHOVA Mwari agare navo.
MAPISAREMA 69:21 Vakandipa nduru zvive zvekudya zvangu; pakunzwa nyota kwangu vakandinwisa vhiniga.
Izvi zvakaitika kuna Jesu pamuchinjiko.
MAPISAREMA 118:22 Ibwe rakaraswa navavaki ndiro rakazova musoro wekona.
MAPISAREMA 110:4 JEHOVA akapika, haangazvidembi, achiti, Iwe uri mupurisiti nokusingaperi unorudzi naMerekizedheki.
MAPISAREMA 107:29 Anonyaradza dutu remhepo, mafungu aro ndokunyarara.
Chiporofita ichi chakazadziswa naJesu makore anoita 1 050 kumberi.
MAKO 4:37 Zvino dutu guru remhepo rakamuka, mafungu emvura akarova mugwa, rikange roda kuzara.
38 Asi iye akanga ari mushure megwa avete pamutsago, vakamumutsa, vakati kwaari, mudzidzisi, hamunehanya kunyange tofa here?
39 Akamuka akaraira mhepo, akati kugungwa, Nyarara ugadzikane! Mhepo ikanyarara, kudzikama kukuru kukavapo.
Kuzodza kwaMwari pakwakanga kuri pana Eria akatarira pasi akawisira pasi maporofita 850 akadaidza moto kubva kudenga kuti apise chipiriso chake chaive chizere mvura. Akauraya maporofita aBaari 450. Akavhara matenga kwemakore matatu nehafu enzara panyika akazonamatira mvura, kukanaya.
Asi mambokadzi Jezebheri paakamutumira tsamba yekumutyisa, nekuti kuzodza kwaMwari kwaive kusiri pamusoro pake ipapo, akatiza neupenyu hwake kubva kwaari.
Kutiza kwake kwakamupedza mumaziso aMwari here? Kwete.
Mwari akazotumira ngoro yemoto kuti imutakure akwire Kudenga.
Maporofita aive akaneta kwazvo panyama zvazvingori pavanhu venyama.
Asi vaizadzisa chikamu chemaGwaro chaitaura nezvezuva ravo. Ndicho chaive chinhu chakakosha.
Ndizvo zvaivakundisa kuti vanzi maporofita.
Tinofanira kudzidza kusatarisa kutadza kwavo tobatsirika nepavakagona.